Ịyọm Bianca Ọdụmegwu Ojukwu bụbu onye nnọchi anya Naịjirịa na Spenu (Spain).
Mgbe ịyọm kelere Ọkammụta Chukwuma Soludo bụ onye a họpụtara ga-abụ gọvanọ ọhụrụ ndị Anambara, o kwuru na ụdị mmeri ọpụrụiche nke APGA nwere na-egosị na ndị Anambra agaghị ekwe ka ntọala Ojukwu hiwere nwụọ.
Ịyọm Ojukwu gosipụtara afọ ojuju otu ya bụ ntuliaka siri ga ma kelere Chukwu na o nweghị ọdachi ọ bụla daranụ ma ọ bụ tigbuo zọgbuo ọ bụla. N'uhuruchi ntuliaka ahụ ka ọ kpọkuru mmụọ di ya nwụrụ anwụ bụ Ikemba ka ọ bịa duo APGA n’ọgbọ ọgụ nke ntuliaka. “Odogwu bụ odogwu, ma ọ dị ndụ ma ọ nwụrụ anwụ!”
Ịyọm Ojukwu kwuru na ihe ndekọ Soludo gara aga gosiputara na ọ ga-eweta mmepe ngwa ngwa n’Anambara nakwa na mpaghara ndịda ọwụwa anyanwụ niile. Ọ na-abụ a hụ nwoke a hụ ogwogwo imi ya.
O kwuru na ya nwere olileanya na Soludo ga-agbasi mbọ ike ime ka APGA kwụrụkwa chịm ọzọ ma kwuo na ọ ga-adị mma iwulitekwa ntụkwasị obi ndị otu APGA site na-ịhụ na e nwere nhaanya nakwa ịkwụwa aka ọtọ n'ọrụ pati ahụ. Nke a pụtara onye tie ọkpọ ya sapụ aka ya ka a hụ na o jighị okwute.
Ịyọm Ojukwu kwesiri ike na nhọpụta Soludo dịka gọvanọ ga-eweta udo ma bụrụkwa kokorokoo okeọkpa APGA nke na-egosi na chi efola n’Anambra. Ọ kpọkuru ndị ji iwe hapụ otu APGA ka ha dajụọ ma kwuo na olileanya dị na ha ga-alọghachite azụ oge adịghị anya ịbịa so nye aka na nhazigharị APGA maka na APGA BỤ NKE ANYỊ.
Agbụrụ, asụsụ na omanala Igbo ga-adị!
A gụọla ya ugboro 190
Ndị obu-egbe agbagbuola ndị otu ọrụ nche asatọ na Rivers